Uploaded by forromantic
ညနေ (၄း၀၀) နာရီ..။ ကိုယ်စီးရမည့် ကားကို ကြည့်ပြီး
ကျေနပ်နေမိသည်။ စီးရမှာ အတော် ဇိမ်ကျမည့် ကားကြီး…။
ဟုတ်သည်။ အခုနောက်ပိုင်း အထူး express ကားတွေ
ပြေးဆွဲလာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို မကြာခဏ
ခရီးသွားနေသူများအဖို့ အရမ်း ကို အဆင်ပြေလွန်းသည်။
လေယာဉ် မစီးနိုင်သူများအဖို့ ယခင်က ကုန်းလမ်းအဖြစ်
ရထားကိုသာ အားကိုး အားထား ပြုခဲ့ရမှ ယခုအခါတော့
အဆင်ပြေပြေနဲ့ သွားလာနိုင် ကြပြီ ဖြစ်သည်။
အခုလည်း ရန်ကုန်ကို ခဏတစ်ဖြုတ်လာဖို့ရှိတာကြောင့်
ကားဂိတ် ရောက်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ (၄း၀၀) နာရီ
ထိုးသည်နှင့် ကားပေါ်ကို ကျွန်တော်တက်လိုက်သည်။
ခရီးသွားဖူးသူတိုင်း သိကြမည်ထင်သည်။ ကိုယ်
ဘယ်တူနဲ့အတူ ထိုင်ခုံ အတူထိုင်ရမလဲဆိုတာ
အများစုကတော့ ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေနဲ့
အတူထိုင်ရဖို့ ဆုတောင်းကြမိထင်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို
ဆုတောင်း ကြတိုင်း ၀တုတ်တုတ် အဒေါ်ကြီးတွေ..၊
အရက်မူးနေတဲ့ သူတွေ..၊ အိပ်ချိန်မရှိအောင် စကားများပြီး
ဆုံးမ သြ၀ါဒ ပေးတတ်တဲ့ လူကြီးသူမ များနှင့်သာ
ယခုလည်း စိတ်ထဲတွင်တော့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်
နီးနီးလှပသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတူထိုင်ရဖို့
စိတ် ကူးယာဉ်ပြီး ကားထဲဝင်လိုက်သည်။ မိမိထိုင်နံပါတ်က
၁၅။ ၁၆ မှာ ဘယ်သူမှ ရှိမနေ..။ မရောက်သေးတာ
ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော် ကားပေါ်တက်ပြီး ၅
မိနစ်လောက်နေတော့ ကားစထွက်သည်။ ဘေးက ထိုင်ခုံမှာ
လူမရောက် လာသေး..။ သြော်… သိပြီ..။ သီပေါ..၊
ကျောက်မဲ တို့မှာ လမ်းကြုံ ၀င်တင်မှာ ဖြစ်နိုင်သည်။
ကားစီးရင် အိပ်တတ်သည်က ကျွန်တော့်အကျင့်ဖြစ်သည်။
။ "ကျွိ" ခနဲ ကားရပ်သံနဲ့ အတူ ကားထိုးရပ်သွားတာ ကြောင့် နိုးလာခဲ့သည်။ နိုးနိုးချင်း ချက်ချင်းပဲ နာရီကို တစ်ချက် ကြည့်လိုက်မိသည်။ အချိန်က (၁း၁၅) မိနစ်.။ နှစ်ယောက် ထိုင်ခုံမှာ တစ်ယောက်တည်း ပက်ပက်စက်စက် အိပ်ပြီး စီးပစ်လိုက်အုံးမည်။ ဒီလိုနဲ့ ညစာ စားသောက်ပြီး ပြန်ထွက်ကတည်းက ကျယ်ကျယ်လွန့်လွန့်နှင့် ပျော်ပျော်ကြီး အိပ်ခဲ့တော့သည်။ ဘယ်လောက် ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားသည် မသိ....၊ နေပြည်တော် လမ်းပေါ်မှာရောက်နေပြီလို့ ခန်းမှန်းမိလိုက်သည်။ Page3..Highway ခရီး တစ်ညတာ စထွက်ကတည်းက အိပ်လိုက်တာ ညစာ စားဖို့ ကျောက်မဲ ရောက်မှ နှိုးသည်။ မိမိဘေးခုံနေရာကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ဘယ်သူမှ မရှိသေး။ ဒါဆိုရင် ဒီနေရာသည် ရောင်းမထွက်သည့်ခုံ ဖြစ်ဖို့များသည်။ ကံကောင်းပြီ.။ ဒါဆို ယခု မန္တလေးကျော်ပြီး.
.၊ ညီမက ခရီးသွားနေကျ မဟုတ်ဘူးလေ...Highway ခရီး တစ်ညတာ ကား ဒရိုင်ဘာနဲ့ စပယ်ယာ အပေါင်းအပါများ စကားပြောဆိုနေသံများကို ကြားလိုက်ရသည်။ "ဒီနေရာ ဒီလို အချိန်ကြီးမှာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ညီမ...၊ ဘာကား စီးလာလဲတော့ မမှတ်မိဘူး." Page4." "ကျွန်မ မှတ်မိတာ ဒီနေရာ ကျွန်မတို့ကားပျက်နေတာပါ..၊ ဘယ်ကားဂိတ်နဲ့လာတာလဲ." "လားရှိုးကပါ." "သြော်.၊ ရန်ကုန်သွားမလို့.. ကလေးငယ်လေးနဲ့ကိုး… ညီမ ဘယ်က စီးလာတာလဲ.။ အဲ့ဒါ ကျွန်မလည်း အပေါ့ခဏဆင်းသွားတာ ပြန်လည်း လာရော ကားက ထွက်သွားပြီး ကျွန်မနဲ့ သမီးလေး ကျန်ခဲ့တာ...
" "တစ်ခုံလွတ်သေးတယ် ဆရာ...။ "ခုံလွတ် ရှိသေးလားဟေ့.." Page5.Highway ခရီး တစ်ညတာ ကျွန်တော် သဘောပေါက်လိုက်သည်။ ကားပျက်လို့ ပြင်နေချိန်မှာ သူမက ကလေးနှင့် အပေါ့ဆင်းသွားမည်။ ကားပြင်ပြီးတော့ ကားဆရာတွေက လူမစစ်ပဲ ကားမောင်းထွက်သွားလို့ သူတို့ ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်သည်။ နေရာ ကလည်း တစ်ကယ့်ကို မှောင်မိုက်နေတဲ့နေရာ။ မသမာသူများနဲ့ တွေ့သွားလို့ကတော့ မလွယ်.
" "ဟုတ်....၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.၊ လိုက်ခဲ့လိုက်ပေါ့." ကားပေါ်တက်လာပြီး သူမ ကျွန်တော့်ဘေးက ခုံမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ အသက် ၂၀ ကျော်ပင်ရှိအုံးမည်။ ဖြူဖွေး နုဖတ်ပြီး ချောမောလှသော သူမကို ကြည့်ရတာ ငွေကြေးရှိ လူတန်းစားထဲမှ ဖြစ်နိုင်သည်။ အနှီးပတ် Page6.Highway ခရီး တစ်ညတာ "တစ်ခုံတော့ လွတ်တယ် ညီမ.၊ ရန်ကုန်ရောက်မှ ဟိုကားမှာပါသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ စုံစမ်းပြီး ယူတာပေါ့...
Highway ခရီး တစ်ညတာ ထားသော ကလေးငယ် တစ်ယောက်က သူ့လက်ထဲမှာ အိပ်မောကျနေသည်။ ဒီလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ချောမော လှပသော ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကားကြုံသာ မတွေ့လို့ကတော့ ကျွန်တော် မတွေးရဲ။ ဒီလိုလမ်း ဒီလိုအချိန်မှာက လူကောင်းထက် လူဆိုးတွေက ပိုများတာကိုး..။ သူမ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်ပြုံးပြသည်။ အပြုံးမှာ အသက်မပါလှ။ ဟန်လုပ်ပြုံးပြမှန်း သိသာသည်။ သူမ အရမ်း ပင်ပန်းနေပြီထင်သည်။ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့် ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီး ဘာမှ အနှောင့်အယှက်မပေးပဲ ပြန်လည် အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ Page7.
"ညီမ." Page 8 .၊ ကလေးက...၊ အလေးများ သွားထားလား မသိဘူး...၊ မသွားထားပါဘူး အကိုရဲ့..။ အရင်က ဒါမျိုးအနံ့မရ။ ကျွန်တော် အားနာ စွာနဲ့ပဲ..၊ ကြည့်လိုက်အုံးမယ်.၊ အနံ့ရလို့…" "သြော်....၊ ဘာအနဲ့ရလို့လဲ.Highway ခရီး တစ်ညတာ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းထဲ အပုပ်နံ့တစ်ခုရလာသည်။ အပုပ်နံ့ကမှ ကြွက်တွေသေပြီး ရှာမတွေ့တဲ့အခါ ရတဲ့ အနံ့မျိုး.
Highway ခရီး တစ်ညတာ "ဟိုလေ....." "စပယ်ယာအကို." Page9.၊ အရမ်းကို ဆိုးတယ်.." "ဟုတ်လား.၊ အသားပုပ်နံ့လိုလိုပဲ..၊ ကြွက်ပုပ်နံ့လိုလို..၊ ညီမတော့ မရပါဘူး.၊ ဒီနား တစ်ချက်လာပါအုံးဗျာ...၊ ဘာအနံ့ရလဲလို့.
" Air freshener လာဖျန်းပေးသည့်နောက်တွင် အနံ့ဆိုးက Page 10 ." "အေး....Highway ခရီး တစ်ညတာ စပယ်ယာ ချက်ချင်းပဲ ကျွန်တော့်အနား လျှောက်လာပြီး တရှုံရှုံနဲ့ အနံ့ခံသည်။ "မရပါဘူး အကိုရ.၊ ကျွန်တော် air freshener လေး လာဖျန်းပေးမယ်.အေး..၊ အကို စိတ်ထင်လို့ပါ..
ကျွန်တော့် လက်မောင်းနဲ့ နောက်ကျော တစ်ပြင်လုံး ကြက်သီးမွေးညှင်းတွေ တဖျင်းဖျင်းထသွားသည်။ ဒုတ်ခတော့ရောက်ပြီ. ဘယ်သူလဲ…၊ လူကော ဟုတ်ရဲ့လား…။ ကျွန်တော် မ၀ံ့ရဲစွာ သူမဘက်ကို လှည့်ကြည့် လိုက်သည်။ ပြူးကြောင်နေသော မျက်လုံးအစုံက ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော် အရဲစွန့်ပြီး တစ်ခု စမ်းသပ်လိုက်သည်။ Page 11 ...Highway ခရီး တစ်ညတာ အနည်းငယ်သက်သာသွားသည်။ လုံးဝ ပျောက်သွား သည်တော့ မဟုတ်။ နံနေသေးသည်။ ကျွန်တော်လည်း ဂဂျီဂဂျောင် ကျတယ် ထင်မှာစိုးတာကြောင့် ဘာမှ မပြောပဲ ဆက်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည်။ ဒီအချိန်မှာပဲ.။ ဒီလို ကြက်သီးမွေးညှင်းထတိုင်း ကျွန်တော် သရဲ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သူမက…။ သူမက..
.။ ကလေးငယ်လေးက မျက်လုံးပြူး ပြီး ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ Page 12 ..Highway ခရီး တစ်ညတာ "အဟွတ်…၊ အဟွတ်…" ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ချောင်းဆိုးသလိုလုပ်ပြီး လက်ကို သူမမျက်စိရှေ့မှာ ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ဖက်ကို လှည့်ပြီးပြူးကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံး မျက်တောင် လုံးဝခတ်မသွား...။ သူမ သည် လူမဟုတ်။ သရဲ.။ သရဲ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် သူချီထားတဲ့ ကလေးကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ပိုသေချာ သွားသည်။ သူမ ချီထားသည်မှာ ကလေးမှာ ခေါင်းသာ ပါပြီး ခန္ဓာကိုယ်မပါ.။ သေချာပြီ.
..၊ မေတ္တာသုတ်ကို အဆက်မပြတ် ရွှတ်ဖတ်နေလိုက်သည်။ စိတ်ကိုလည်း သူ့ဖက်မရောက်အောင်...။ နိုးစမ်းပါ..။ ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲ စိတ်ထဲကနေ ဘုရားစာဆိုပြီး..။ သေချာသည်။ ဒါ အိပ်မက်မှ မဟုတ်တာ။ တစ်ကယ် ဖြစ်နေတာကြီး.။ အိပ်မက် မက်နေတာ.။ သတိပြန်ထားပြီး သူမကိုပြန်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော့် ကို ပြူးကြောင်ကြည့်နေသော သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးလေး လုံးက နေရာမရွှေ့. ဘုရားစာထဲကိုသာ အာရုံပို့လိုက်သည်။ ပြီးတော့ စပယ်ယာကို Page 13 .Highway ခရီး တစ်ညတာ ကျွန်တော် ချက်ချင်း မျက်လုံးမှိတ်လိုက်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပေးသည်။ ဒါ တစ်ကယ်မဟုတ်ဘူး.။ အိပ်မက်က နိုးစမ်း.
. ဘယ်သူမှရှိမနေ." တိုးညှင်း သိမ်မွေ့သော တရားသံက ကြားရရုံလေး ထွက်လာသည်။ ကျွန်တော် တရားနာရင်း စိတ်ကို မပြန့်လွင်အောင် ထိန်းရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။ မနက် နိုးနိုးချင်း ကြည့်မိတာက ဘေးနားက နေရာ..Highway ခရီး တစ်ညတာ "ကျွန်တော့်ကို တရားခွေ တိုးတိုးလေးဖွင့်ပေးပါလား..။ ကျွန်တော် စပယ်ယာကို မေးကြည့်သည်။ Page 14 .၊ အိပ်ရင်း တရားနာလို့ရတာပေါ့..
၊ ကားက လုံးဝမရပ်ဘူး.Highway ခရီး တစ်ညတာ "ဘေးနားက လမ်းကြုံလိုက်လာတဲ့ ညီမ ဆင်းသွားပြီလား...." "အခုသူ မရှိတော့ဘူးလေ…" "ခုံများ ပြောင်းထိုင်နေသလား…" Page 15 .၊ တောက်လျှောက်မောင်းနေတာလေ." "မဆင်းပါဘူး..
.Highway ခရီး တစ်ညတာ သူပြောမှ ကျွန်တော်လည်း ကားထဲက ခုံတွေအားလုံး လိုက်စစ်ကြည့်သည်။ မတွေ့. အကိုကလည်း ကားမှ မရပ်တာ.၊ မင်းတို့ကလည်း လူတစ်ယောက်လုံး ပျောက်သွားတာကိုတောင် မသိဘူးလား.။ "မရှိပါဘူးကွာ.၊ ထူးဆန်းတယ်ဗျာ.၊ လူစစ်ဖို့ မလိုဘူးလေ...၊ ဘယ်ရောက်သွားတာ လဲ ဒီသားအမိ…" Page 16 ." "အာ.....
.." Page 17 .Highway ခရီး တစ်ညတာ "နေပါအုံး…၊ နောက်တစ်ခုက…၊ ကျွန်တော်တို့ကားက… လားရှိုးကနေ အစောဆုံးထွက်တဲ့ကား. ရှေ့မှာ ဘယ် လားရှိုးကားမှ မရှိဘူး." "မင်းဟာ သေချာလို့လားကွာ..." "အာ အကိုကလည်း ကျွန်တော်တို့က ဘယ်ကား ဘယ်ရောက်ပီ ဆိုတာ အချိန်ပြည့် ဖုန်းနဲ့ချိတ်နေတာဗျ.
၊ မင်းကို ပြောပြလိုက်အုံးမယ်....။ ငါ့ကို ဘာမှ ဒုက္ခမပေးတာနဲ့ ငါလည်း တစ်ညလုံး ဘုရားစာတွေရွတ်၊ Page 18 .၊ အေး.။ ကိုယ်မရှိဘူး. သတင်းစာထဲမှာတော့ ဖတ်လိုက်ရတယ်… ကျွန်တော် တို့ တင်ခဲ့တာ အဲ့ဒီနှစ်ယောက်များ ဖြစ်နေမလား.၊ သူချီထားတဲ့ကလေးက ခေါင်းပဲ ရှိတယ်...Highway ခရီး တစ်ညတာ "ဒါဆို ငါတို့တွေ့ခဲ့တာ ဘာကြီးလဲ…" "လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်က အဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာ ကားတိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ…။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ကလေး တစ်ယောက် ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်တဲ့ .." "ဖြစ်နေမလား မဟုတ်ဘူး... ဖြစ်နေတာဟေ့.
.Highway ခရီး တစ်ညတာ မေတ္တာတွေ ပို့နေလိုက်တာ. ကားတားတားပြီး စီးတတ်ကြတဲ့ သူတွေ ပိုမိုများလာသလို လမ်းပေါ်မှာ ကားတိုက်မှု၊ ကားမှောက်မှု၊ လူသေဆုံးမှုတွေကလည်း ပိုမို ဖြစ်လာကြတာဟာ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုလားဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်ကို ခေါင်းခြောက် စေခဲ့ပါတယ်.. လူမသိသူမသိပဲ.။ အဲ့ဒီ နာမည်ကြီးတဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးမှာ. ညမှောင်မှောင်မှာ.၊ ရှေ့လျှောက် ညပိုင်းဆို မင်းတို့ ကားပေါ်မှာ တရားခွေလေး ကြားရရုံဖွင့်ထားပါကွာ…၊ ဘေးကင်းတာပေါ့..." ဒီလိုပါပဲ..။ သင်တို့လည်း ညဘက် အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာ ခရီးဝေးကား စီးရတဲ့အခါ လမ်းကြုံလို့ တားဆီးတဲ့ မသင်္ကာဖွယ်ရာ လူများတွေ့ရင် မေတ္တာသုတ်ကိုသာ နာနာဖိရွှတ်ပါလို့ Page 19 ..
.Highway ခရီး တစ်ညတာ အကြံပေးလိုက်ရပါစေ.။ Page 20 .
Documents Similar To Highway ခရီး တစ်ညတာ
Chaw Su Myat Min
Yoe Tal So Tar
မြန်မာဆိုက်ဘာ - ပရလောကသားများအကြောင်း
အမည်မသိ - ကျောက်ဂူထဲမှာ
Apaing Athnin Thakhin Yintwin
Doe. Goe Kyite Yin Ein Lite Khae.
အမည်မသိ - ဖေဖေကြီးညာတယ်
More From forromantic
Monster Legends Guide_ Breeding Combinations _ Quick Gamer